Ezona zicelo zilungileyo zi-7 ziguqula umbala weenwele ngexesha lokwenyani
Uhlelo lokusebenza olutshintsha umbala weenwele lunokuba luncedo kokubini ukuzonwabisa kunye nokukhohlisa abahlobo bakho kunye nokukunceda uthathe isigqibo sokuba upeyinte ntoni umthunzi. Eziapps zikuvumela ukuba uzame inkangeleko entsha ngaphambi kokuya esalon, zihlala ziyinyani. Ke ngoko, kukho umngcipheko omncinci wokuzisola kamva.
1. Umbala weenwele
Umbala weenwele ubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubala imibala, ezinje nge ntathu, mnyama, khula unyukele okanye zonke iinwele. Xa uvula usetyenziso, umsebenzisi ujongene nomfanekiso ovela kwikhamera, kodwa kunokwenzeka ukuba usebenzise ifoto kwifowuni yeselfowuni. Khetha nje imibala ezantsi kwesikrini.
Kukho iinketho zobuganga, ezinjengee-shades ezahlukileyo eziluhlaza, ezimfusa, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nezona ziqhelekileyo, ezinjenge-blonde, brown kunye nobomvu. Isicelo sikwakuvumela ukwahlula isikrini ukuthelekisa imifanekiso ngexesha lokwenyani. Nangona ingenantando, chukumisa nje isikrini ukuthatha ifoto okanye ukubamba kwaye ubambe ukurekhoda ividiyo.
Umbala wenwle (simahla, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): Android | ios
2. UFabby Jonga
Fumanisa ukuba ujongeka njani ngombala weenwele ezintsha ngexesha lokwenyani
UFabby ujonge i-app yovavanyo kaGoogle eyilelwe ngokukodwa ukutshintsha umbala weenwele. Ukusetyenziswa kwethoni kwenzeka ngexesha lokwenyani. Chukumisa nje isitshixo kwaye ujonge utshintsho lwexesha. Kukho iinketho zeklasikhi, ezinjenge-blonde, bomvu, bumdaka kunye ngwevu, nokuba zezona zixhaphakileyo, njengeblue, pink, orange, njl
Ukuba uyasithanda isiphumo, ungathatha ifoto, kwishutter embindini wesikrini, kwaye wabelane ngokulula ngayo kuFacebook, Instagram, Snapchat, phakathi kwabanye. Inkqubo ayinayo imisebenzi entsonkothileyo, kodwa ayinakho nokwenza ngokwezifiso okanye izixhobo zokuhlela.
Ukujonga kukaFabby (simahla): Android | ios
I-Instagram ayisosicelo esithile sokutshintsha umbala weenwele, kodwa ineefilitha ezininzi ezikuvumela ukuba ufake ii-shades ezintsha ngexesha lokwenyani. Ukwenza oku, ngokulula fikelela kumaBali, skrolela kwibar yeziphumo ukusuka ekunene ukuya ekhohlo, kuye esiphelweni. Emva koko uza kubona ukhetho Iziphumo zokuKhangela, ukuba kufuneka uthinte.
Kwisikrini esivelayo, yiya kwi icon yeglass magnifying, ebekwe phezulu kwesikrini ngasekunene. Kwibala lokukhangela, faka amagama anje iinwele ezimibalabala o umbala wenwle kwaye uya kubona uninzi lweenketho zeefilitha ezibonelela ngemisebenzi.
Dlala i dee oyithandayo emva koko Ukubanamava. Uya kusiwa kwiscreen sokupapashwa kwamabali, apho ungathatha khona iifoto kwaye urekhode iividiyo, njengoko usenza ngayo nayiphi na enye icebo lokucoca ulwelo.
Isikhokelo Iifilitha ezifihliweyo kunye neZiphumo kumabali e-Instagram-Jonga indlela yokufumana icacisa isifundo ngendlela eneenkcukacha.
Instagram (simahla): Android | ios
I-K-POP ye-simulator yeenwele
I-Hairfit iphefumlelwe ziinwele zamagcisa ohlobo lomculo waseKorea waseKorea. Isicelo sikuvumela bahlupheke ifoto esuka kwigalari okanye uyithathe kwangoko. Umsebenzisi kufuneka kuqala akhethe iinwele kwaye aqhubeke tincture Ukutshintsha inowuthi.
Zininzi iinketho zemibala ezikhoyo, kubandakanya ezithandwayo ezinje nge-lilac, ipinki, mfusa, kunye nohlaza. Zombini iinwele kunye nombala zinokuhlengahlengiswa ukuze zikhangeleke njengezendalo ngangokunokwenzeka.
Iinwele (simahla): I-Android
Ngaphandle kokugxila kwiziphumo zobuso, i-YouCam Makeup inento ephambili yokutshintsha umbala weenwele ngexesha lokwenyani. Umsebenzisi unokuzama imibala emibini, atshatise owona mthunzi, okanye asebenzise umthunzi omnye.
Kuyenzeka ukuba uhlengahlengiso kubunzulu, ukuqaqamba, kunye nokugqunywa ngombala okanye ukuba ungakanani ukuxuba kwitoni yentsusa. Ukuba uyasithanda isiphumo, isicelo asikuvumeli ukuba uthathe isithombe kuphela, kodwa nokurekhoda iividiyo ngesihluzi.
Ubume beCam (simahla, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): Android | ios
6. Idayi yeenwele
Idayi yombala weenwele ikuvumela ukuba uthathe ifoto kuloo ndawo okanye usebenzise enye ekhoyo kwiThala leencwadi. Emva koko, umsebenzisi kufuneka akhethe, emfanekisweni, indawo yeenwele kwaye emva koko achukumise ithoni afuna ukuyifaka. Unokukhetha umbala omnye ukupeyinta yonke into kwaye ungeze ezinye kwimigca embalwa.
Ukuba uyafuna, unokwenza nombala wakho usebenzisa ukhetho Yongeza umbala. Isiphumo sinokugcinwa kwifowuni okanye kwabelwane ngaso kwezinye usetyenziso.
Idayi yeenwele (simahla, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo): iOS
7. Utshintsho lombala weenwele
Umtshintshi woMbala weenwele unesiphakamiso esifana kakhulu neDayi yombala weDayi ye-Android. Isicelo sikuvumela ukuba usebenzise iifoto ezivela kwigalari okanye uzithabathe kuloo ndawo. Emva koko cofa nje umbala ofunwayo kwaye uwusebenzise ngaphezulu kwendawo yeenwele ngomnwe wakho. Kuyenzeka ukuba ufake iithoni ezininzi kumfanekiso omnye kwaye ubalale nezinye izinto zomfanekiso.
Kananjalo umsebenzisi unokutshintsha ubungakanani bombala, enze ukuba isiphumo sibe sesokwenyani. Isicelo sinikezela ngeendlela zokwabelana ngesiphumo kwinethiwekhi yoluntu okanye ukusigcina kwifowuni. Unokucelwa ukuba uyinike iinkwenkwezi ezintlanu. Akunyanzelekanga ukuba wenze oku ukufikelela kubutyebi.
Utshintsho lombala weenwele (simahla): I-Android
Eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele kunye nemibala ukutshintsha inkangeleko
Isicelo sitshintsha isini sakho kwaye sikuguqule ube yindoda okanye umfazi; jonga indlela yokusebenzisa
Iiapps eziza kunceda ekwenzeni